Windows Messenger oo gabi ahaan la xirayo 15 March – idalenews.com
Windows Messenger oo gabi ahaan la xirayo 15 March
Shirkadda Microsoft waxay ku dhawaaqday in 15 March ay si rasmi ah u xiridoonto adeegga xariirka bulshada ee Windows Live Messenger, wixii ka dambeeya waqtigaa cinwaanada Windows Live Messenger ma shaqeyn doonaan oo hawada ayaa laga saari doonaa.
Microsoft waxay macaamiisheeda Isticmaasha Windows Messenger ku boorisay iney u guuraan Skype oo ah adeeg xariir bulshadood kale oo ay shirkadu maamusho. farriin ay shirkaddu u dirtay Isticmaalayaasha adeega ay xireyso waxay ugu baaqday inay sii bartaan habka loo isticmaalo Skype ka hor inta aan la joojin adeega Windows Messenger.
Baabinta adeega Windows Messenger waxaa loo sababeeyay shirkadda Microsoft oo adeega Skype oo isticmaalkiisu sii kordhayo ka heshay Adduun dhaqaale oo dhan 8 bilyan iyo bar lacagta Mareykanka ah sanadkii lasoo dhaafay.
November-tii lasoo dhaafay ayey shirkadu sheegtay in horaanta 2013-ka ay xiri doonto adddeega Windows Messenger, wixii markaa ka dambeeyay waxay shirkadu u fududeysay isticmaalayaasha Windows Messenger inay ku wada hadli karaan, si sahlan ugu wareegi karaan Skype.
Waxay Shirkaddu sidoo kale Windows Messenger kusoo dartay badhan markii dhag lasiiyo Skype u badalaya Windows Messenger, Shirkaddu waxay leedahay adeegu si caadi ah buu u shaqeyn doonaa ilaa inta laga gaarayo 15-ka March.
Adeegga Windows Live Messenger ayaa loo bartay MSN markii ugu horeysay ee la bilaabay 1999.
Wixii intaa ka dambeeyay waa la sii hormarinayay, iyadoo lagu soo kordhiyay sawir u sii diris, adeeg is arag ah iyo Ciyaaraha kumbiyuutarada, waxaa la rumeysan yahay in adeegga ay isticmaalaan in ka badan 300 Milyan oo qof bil weliba.
Shiinuhu wuxuu noqon doonaa dalka kaliya ee laga sii isticmaali doono adeeggan marka dunida inteeda kale laga xiro sababtoo ah adeegu ruqso shaqo ayuu ku haystaa dalkaas.
MSN-ku wuxuu ka mid yahay baraha xiriirka bulshada ee Soomaalidu Isticmaalkeedu ku badan tahay, haddiiba uusan ahayn kan ay Soomaalidu ugu isticmaalka badan tahay.
Mareykanka waxaa si joogta ah uga isticmaasha 8 Milyan oo qof taas oo lagu Macneeyay 48% inay hoos u dhaceen dadka isticmaala, wuxuuse labo jibaar ka badan yahay bulshada isticmaasha Skype.